Musuq Maasuq ka dhex jira Ciidamada Xoogga | KEYDMEDIA ONLINE
Musuq Maasuq ka dhex jira Ciidamada Xoogga
Mareykanka oo dhinacyo badan ka taageero Soomaaliya ayaa sheegay in hoggaanka ciidamada uu ka dhex jiro musuq Maasuq iyo qaraabo kiilnimo dhaawaceyso dib u habeynta ciidamada.
MUQDISHO, Soomaaliya - Musuq Maasuq, eex iyo qaraaba kiilnimo ayaa ka dhex jirto hoggaanka ciidamada xoogga dalka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska safaaradda Mareykanka ee Muqdisho.
Qoraalkaan oo lagu taageerayay dib u habeynta qeybta Amniga ayaa lagu sheegay in musuqa ka dhex jiro ciidamada uu wiiqaya, islamarkaana dhaawacaya dib u habeynta iyo hormarka la doonayo in cadowga lagaga guuleysto.
Farriintan ayuu Mareykanka ku soo beegay, iyadoo dalku ku jiro xilli kala guur ah, oo aanu dalku laheyn Ra'iisul Wasaare muddo 45 cisho ah, kadib markii Ra'iisul Wasaarahii hore la riday 25 bishii Julay.
Sidoo kale qoraalka ayaa u muuqday farriin toos ah oo ku soctay Milateriga Soomaaliya, kaddib markii ay soo baxeen warar sheegaya in shaqo joojin lagu sameeyay Taliyihii Ciidanka DANAB ee uu Mareykanka tababaro Gaashaanle Cabdimaalik Ismaaciil, kaasoo dalka Mareykanka wax ku soo bartay.
Dhinaca kale waxaa dhowaan is casilay Mas'uulkii qeybta dib u habeynta amniga u qaabilsanaa Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha, kaasoo ka cabanayay faragelin uu sheegay inuu uga imaanayay la taliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweynaha, isagoona isaga tegay shaqadii uu ka hayay xafiiskaas.